लुम्बिनीमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : एमाले विरुद्धको गठबन्धनलाई सकस ! - CNN EXPRESS
लुम्बिनीमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन : एमाले विरुद्धको गठबन्धनलाई सकस !
जेठ १७, बुटवल । राष्ट्रियसभामा रिक्त एक पदका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा आज मतदान हुँदै छ । माओवादी केन्द्रबाट विजयी अर्घखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा पद रिक्त भएको थियो । सोहि पदमा आज निर्वाचन हुन लागेको हो ।
प्रदेश राजधानी दाङको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा दुईजना उम्मेदवार छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपाल समुह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दृगनारायण पाण्डेय र एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का प्रतिस्पर्धामा छन् । उपनिर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य ८३ जना तथा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु गरी २१७ गरी जम्मा ३ सय जना मतदाता छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका कल्पना पाण्डेय, सन्तोषकुमार पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी र विजयबहादुर यादवलाई पनि निर्वाचन आयोगले पूरक मतदाताको रुपमा मताधिकार दिएको छ ।
एमालेको एउटा समूहमा बिपक्षमा लागेको र माओवादीसमेत नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न सहमत भए भएपनि गठवन्धनलाई यो चुनाव एमालेलाई जित्न सकस हुने देखिएको छ ।
Previous: १ लाखलाई सीप तालिम दिन ४० करोड बजेट विनियोजन
Next: लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा कांग्रेस उम्मेदवार पाण्डेय विजयी